भिडियो Archives - ejhajhalko.com
काठमाडौं – चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरियो । दीपेन्द्र लामाको कथा तथा निर्देशन रहेको चलचित्रको ट्रेलरमा राजनीति र प्रेमको समिश्रण देख्न सकिन्छ । चलचित्रमा दीपकराज गिरी र केकी अधिकारी प्रेममा भएको देखाइएको छ । य...
पाकिस्तानका नेता मसरूर अलीले पत्रकारलाई लाइभ शो मै कुटे (भिडियोसहित)
https://youtu.be/R_rhoeIk2nM?t=5 पाकिस्तानको एक टिभी च्यानलका पत्रकार लाइभ शो मै कुटिएका छन्। के २१ न्युजमा न्युज लाइन विथ आफताब मुगेरी शो मा सत्तारूढ दल पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) का नेता मसरूर अली सियालले पत्रकारलाइ कुटपिट गरेका हुन्। उनले बहस चलिरहदा पत्रकारलाई धकेलेर भुइँमा लडाए। त्यसपछि पुन उठाएर ग...
भाडा बढीमागे पछि दिदैँन भन्दा चालकले बिच सडकमै यात्रु कुटे (भिडियो सहित)
https://youtu.be/os-igG-4BlQ?t=19 कञ्चनपुर, १७ जेठ । महेन्द्रनगरको बिच सडकमै एकजना सवारी चालकले यात्रु महिलामाथि दुव्र्यवहार गर्दै कुटपिट गरेका छन्। से १ ज १०९४ नम्बरको उईङगर गाडीका चालक बेदकोट नगरपालिका १ सिसैयाका गोकुल बोहराले सडकमै धनगढी उपमहानगरपालिका १ का २८ बर्साीय लक्ष्मी धनाडीमाथि कुटपिट गरेका हुन । भ...
क्रिकेट रंगशालाको बार भत्काइदिए पछि धुर्मुसले रुदै भने विदेशमा बस्ने नेपालीको पसिनामाथि डोजर चलाइयो (भिडियो सहित)
चितवन,१५ जेठ । चितवनको रामपुरमा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको बार भत्काईएको छ । आज विहान केहि ब्यक्तिहरुले डोजर लगाई जस्ताको बार लगायत केही संरचना पनि भत्काए हो । स्थानीय नेकपा नेता प्रकाश कंडेलको नेतृत्वमा आएको समूहले डोजर लगाएर तारबारसहितको संरचना भत्काएको थियो । डोजरसहित आएका केही ...
गुजरातको ट्युसन सेन्टरमा आगलागी हुँदा २२ विद्यार्थीको मृत्यु, २१ गम्भीर घाईते (भिडियो हेर्नुहोस)
पोखरा,११ जेठ । भारतको एक ट्युसन सेन्टरमा शुक्रबार आगलागी हुँदा कम्तीमा २२ विद्यार्थीको ज्यान गएको छ । २१ विद्यार्थी गम्भीर घाइते छन् । गुजरात राज्यको सुरत शहरको एक ट्युसन सेन्टरमा पढाइ भइरहेका बेला आगलागी भएको हो । माथिल्लो तलामा रहेको भवनमा एक्कासि आगो फैलिएपछि केही विद्यार्थी त्यसमै जलेका थिए । आगोबाट जोगिन के...
गायिका सरिताले कसलाई बदमास भन्दै गालि गरिन ? (भिडियो)
गायिका सरिता कार्कीको स्वरमा रहेको नयाँ भिडियो बदमास सार्बजनिक गरिएको छ । स्टाफ नर्स बन्ने सपना बुनेर गोरखाबाट काठमाडौँ छिरेकी सरिताको आवाजमा रहेको गीतको भिडियो लाइ उनले आफ्नै युट्युब च्यानलबाट सार्बजनिक गरेकी हुन् एकनारायण भण्डारीको शब्द तथा संगीतमा रहेको गीतको भिडियो लाइ शंकर बि.सी.ले निर्देशन गरेका हुन् । दुर्गा प...
कमेडी गीत ‘नेपालीलाई ग्यास्ट्रिक’ मा सरापे र सीताको दमदार अभिनय
गायक तेजश रेग्मी र सिता के.सी.को आवाजमा रहेको नयाँ गीत नेपालीलाई ग्याष्टिक सार्वजनिक गरिएको छ । मुकुन्द पौडेलको शब्द रहेको गीतमा नेपालीको खानपिनले कसरी रोग निम्त्यायको छ भन्ने कुरा उठाएको छ । पछिल्लो समय टिपिकल गीतहरु स्रोता दर्शक माझ प्रस्तुत गर्दै चर्चामा रहेका रेग्मी र मलाई अमेरीका यहि जस्तो चर्चित गीतमा आवाज दिएक...
दिपेन्द्र साह किन भन्दैछन सरि ? (भिडियो)
गायक दिपेन्द्र साहको शब्द,संगीत र स्वरमा रहेको गीत सरि बेबीको भिडियो सार्बजनिक गरिएको छ । ब्रिजेस श्रेष्ठको संगीत संयोजन रहेको गीतको भिडियोमा आशिष नापित र मेलिना दुवाल फिचरिंग छन् । सुरेश काफ्लेको छायांकन,सम्पादन र निर्देशनमा बनेको भिडियोलाइ अन्नपूर्ण फिल्म्सले निर्माण गरेको हो । https://www.youtube.com/watch?v=EmOENr...
दुर्व्यसनी चौंथो शृंखला सार्बजनिक किन र कसरि लाग्छन युवा युवती कुलतमा (भिडियो)
नेपाली समाजमा राम्रा भन्दा नराम्रा कुराले बढी स्थान र चर्चा पाउने गर्छ युवा पुस्तालाइ जुन कुरा गर्न हुन्न र नराम्रो भन्यो त्यसैमा बढी लत लाग्ने गर्छ । आजकलका थुप्रै युवा युवतीहरु कुलतमा फस्न थालेका छन् । कति पय रहरले फस्ने गर्छन भने कति पय देखासेखिले दुर्व्यसनीमा लाग्ने गर्दछन यस्तै दुर्व्यसनी रोक्न थोरै मात्र भय पनि...
रेखा थापाले गायक पर्शुरामको उत्तर नदिए पछि ….(भिडियो)
भ्यालेन्टाइन डेको पूर्व सन्ध्या पारेर गायक पर्शुराम रिजालले एउटा रमाइलो गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । लोकप्रिय नायिका रेखा थापाप्रति समर्पित भनिएको उक्त गीतको शीर्षक नै ‘रेखा थापाले...’ राखिएको छ । कृष्णराज भण्डारीको शब्द तथा संगीत निर्देशनको उक्त गीतमा उदयराज पौडेलको संगीत संयोजन रहेको छ । केही समयअघ...
गाँजाको तालमा पशुपति परिसरमा नाँगा बाबाहरुको चर्तिकला (भिडियो)
हरेक बर्षको शिवरात्रीमा पशुपतिमा देखिने नांगा बाबाहरुको अत्याधिक चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ । गाँजाको तालमा पशुपति परिसरमा नाँगा बाबाहरुको चर्तिकला हेर्न धेरै मानिसहरुको भिडभाड लाग्ने गर्छ । नेपालका मात्रे होईन भारतका विभिन्न सहरबाट पशुपतिमा बाबाहरु आउने गर्छन् । गाँजाको तालमा पशुपति परिसरमा उनीहरु आगो तापेर बसेका हुन्...
गाउँ बिकास को लागि योजना बुन्दै गाउँका युवाहरु (भिडियो)
मानिस अभाबले मात्र नभई सम्पन्नताले गर्दा पनि बिग्रने गरेका धेरै उदाहरण हाम्रो समाजमा छन् । आजकल धेरै युवा युवतीहरु दुर्व्यसनीमा फस्न थालेका छन् दुर्व्यसनीमा फस्ने बिबिध कारणहरु हुन्छन । कतिपय फ्रस्टेसनका शिकार बन्छन भने कतिपय घरबाट समय र माया नपाऊदा पनि लागु पदार्थको शाहारा लिने गर्दछन । यसै बिषयमा आधारित रहेर निर्मा...
कान्छी बनेकी स्वेता प्रेस मिटमा नै यसरि भक्कानीइन (भिडियो)
स्वेता खड्का निर्मित तथा अभिनित चलचित्र ‘कान्छी’को ट्रेलर रिलिज गरिएको छ । राजधानीमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै ट्रेलर सार्बजनिक गरिएको हो ट्रेलरले चलचित्र गाउँले परिवेशमा निर्माण गरिएको आभास दिलाउछ । यम थापाको कथालाइ आकाश अधिकारीले निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रमा दयाहाङ र श्वेताका अलावा कामेश्वर चौरसिया, आ...
प्रदिप खड्का भन्छन मेरो बडीगार्ड देखेर ४ जना ढले (भिडियो)
चलचित्र प्रेमगीत बाट सफल नायकको परिचय बनाउन सफल प्रदिप खड्का अहिलेका चल्तीका कलाकार हुन् उनि अभिनित चलचित्र प्रेम गीत र प्रेम गीत २ सफल बने पछि उनको डिमाण्ड पनि बढ्न थालेको छ उनि अभिनित पछिल्लो चलचित्र लिली बिलि प्रदर्शनको तयारीमा रहेको छ चलचित्रको घोषणा कार्यक्रममा बडीगार्डका साथ उपस्थित प्रदीपको निकै नै चर्चा चलेको थ...
भल्गर कन्टेन्ट यु ट्युबमा आइरहेका बेला सन्देश मुलक सिरियल दुर्व्यसनी (भिडियो)
समाजमा पछिल्लो समय युवाहरु कुलतमा लागेर बिग्रेका घटना धेरै घटिरहेका छन । पारिवारीक हेलचक्राइले होस या साथी भाइको संगको कारणले कलिलै उमेरमा युवाहरु यस्तो कुलतमा फस्ने गरेका छन । यस्तै समाजमा भएका यर्थाथ घटनाहरुलाई समेटी तयार पारीएको टेलिसिरियल दुर्व्यसनीको भाग र्दुइ पनि सार्वजनिक भएको छ । सेलिब्रेटी नेपालको अफिसियल च्...
प्रदीप खड्का अभिनित नयाँ चलचित्र ‘लिलिबिली’को पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । स्कटल्याण्डको रमणीय स्थानहरुमा छायाँकन गरिएको गीतमा प्रदीपले जसिता गुरुङसँग स्क्रिन शेयर गरेका छन् । राजधानीमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै निर्माण युनिटले पहिले गीत सार्बजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा चलचित्रका कलाकार,निर्माता,निर्देश्स...
शिल्पा र पृथ्वीराजको ‘बम्पर उपहार’ (भिडियो)
छविराज ओझा र अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल निर्माता रहेको चलचित्र ‘मङ्गलम’को नयाँ गीत सार्वजनिक गरिएको छ । माघेसंक्रान्तिको अवसर पारेर सार्वजनिक गरिएको गीतमा शिल्पा र पृथ्वीराज प्रसाई फिचरिंग छन् । प्रमोद खरेलको स्वरमा रहेको ‘बम्पर उपहार…’ बोलको गीतमा दीपक शर्माको संगीत र लेखु सहयात्रीको शब्द रचना रहेको छ । गीतको कोरियोग...
सुमधुर स्वरकी धनि जुनु भन्छिन मरिलानु के छ र ? (भिडियो)
गायिका जुनु गौतमको आवाजमा रहेको मरिलानु के छ र ? बोलको गितको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । अनिश श्रेष्ठको सङ्गीत र यशु थापाको शब्द, ‘छोड अब सबै कुरा गर पिरती को कुरा मरि लानु के नै छ र रिस राग बन्द गर‘ बोलको गीतको भिडियोको निर्देशन अनिष श्रेष्ठले गरेका हुन भने सुरेन्द्र श्रेष्ठको छायांकनमा रामेश्वर जिरेलले सम्पादन गरेक...
नेपाल आइडलका तिन आइडलहरुको स्वरमा गोरी भर्सेस गोर्खे सार्बजनिक
संगीतकार टिका दाहालको संगीतमा नेपाल आइडलका टप टेनमा पुग्न सफल ३ प्रतिस्पर्धीको आवाजमा गोरी भर्सेस गोर्खे बोलको गीत भिडियो सहित तयार भएको छ । नेपाल आइडल प्रतियोगी सुरज थापा,सागर आले र राहुल बिस्वाशको स्वर रहेको गीतमा शब्द रमेश दाहालको रहेको छ। ३ जना नेपाल आइडलका उत्कृस्ट प्रतियोगीको स्वर रहेको गीतको लिरिकल भिडियो सार्...